Messenger Bot ဆိုတာ ဘာလဲ ?
Messenger ကနေ မေးမြန်းသမျှကို လူတစ်ယောက်က အချိန်ပြည့် ဖြေပေးနေသလို မြန်မြန်ဆန်ဆန် နဲ့ တိကျမှန်ကန်တဲ့ တွက်ချက်မှုတွေနဲ့ အဖြေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ Bot တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အတွက် အချိန်ပြည့် ကူညီပေးနိုင်တဲ့ စက်ရုပ်လေး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Hashbuy က ဘာတွေ လုပ်ပေးတာလဲ ?
ဈေးဝယ်သူတွေရဲ့ မေးမြန်းစုံစမ်းမှုတွေ၊ အော်ဒါမှာယူတာတွေ၊ အော်ဒါ Cancel လုပ်တာတွေ အားလုံးကို သင့်၏ Facebook Page ရဲ့ Messenger ကနေတဆင့် အလိုအလျောက် အလုပ်လုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Hashbuy က Online Shopping လုပ်ငန်းကို ဘာတွေ အထောက်အကူဖြစ်နိုင်လဲ ?
Hashbuy အနေနဲ့ လူကြီးမင်းတို့ ကိုယ်တိုင် အချိန်ပေးပြန်လည်ဖြေကြားစရာမလိုပဲ ကိုယ်စားဈေးရောင်းပေးမှာပါ၊ လူကြီးမင်းတို့ မအားလပ်လို ပြန်လည်မဖြေကြားနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ အော်ဒါတွေဝင်လာမယ်ဆိုလဲ လွတ်သွားတာမျိုးမဖြစ်တော့ပါဘူး၊ Stock Inventory တွေကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ Store Manager စနစ်လည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Hashbuy နဲ့ ချိတ်ဆက်မယ့် Online Shopping Page တွေကို လူအများသိအောင် ဘယ်လို လုပ်ပေးနိုင်လဲ ?
Value-Added Service အနေနဲ့ Hashbuy Page မှာ Register Users တွေ ရဲ့ Page ကို Facebook Promote/Boost လည်း လုပ်ပေးဦးမှာပါ၊ အခမဲ့ Free Services အနေနဲ့လုပ်ပေးသွားမှာပါ၊
Hashbuy က ဘာတွေ တာဝန်ယူပေးနိုင်လဲ ?
Hashbuy Bot နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဆင်မပြေမှုများအတွက် Monday to Friday Office Hour (9:00AM to 5:00PM) အတွင်း ဖုန်း (သို့) Facebook Messenger Box တို့မှ တဆင့် ပြန်လည်ဖြေကြားဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ Saturday and Sunday Non-office Hour အတွက် Critical/Emergency Case များအတွက် လိုအပ်သလို ပြန်လည် ဖြေရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Hashbuy နဲ့ ဈေးရောင်းရင် Channel ဘယ်နှစ်မျိုးနဲ့ ရောင်းလို့ရလဲ ?
Website, Facebook, Messenger Bot ဆိုပြီး (၃)မျိုးနဲ့ ရောင်းလိုရပါတယ်။ Facebook နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ Professional Content Creation တွေကိုလည်း Hashbuy ကိုအသုံးပြုပြီး ကိုယ်တိုင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Hashbuy ဘက်က Delivery Service လုပ်ပေးပါသလား ?
Delivery Service တော့ မလုပ်ပေးပါဘူးခင်ဗျာ။ Delivery အတွက် အခဲခက်ဖြစ်နေရင်တော့ Delivery Serive ပေးနေတဲ့ Partner Comapny နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။
Hashbuy မှာ ဘယ်လို Register လုပ်ရလဲ ?
Register လုပ်ရတာကတော့ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ပေးထားတဲ့ Link (https://hashbuy.com) ကိုဝင်ပြီး Become A Hashbuy Seller ရဲ့ အောက်မှာ သင့်ရဲ့ Store Name ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Connect နှိပ်ရုံပါပဲ။ အဲနောက်မှာတော့ သင့်ရဲ့ Facebook Username နှင့် Password ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Login လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ Link How to Sign Up မှာကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဝန်ဆောင်ခ (သို့) ဝန်ဆောင်မှုဈေးနှုန်း ကကောဘယ်လိုယူလဲ ?
Customer များ အဆင်ပြေမှုကို ရှေ့ရှုပြီးတော့ သင့်တင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေ သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ Pricing Plan တွေကတော့ Basic Plan()၊ Standard Plan()၊ Premium Plan() နှင့် .…...
အစမ်းအနေနဲ့ Trial Version ပေးသုံးမှာလား ?
Official Launch ကနေ ၁၄ရက် Trial ပေးသုံးထားပါတယ်၊ ၁၄ရက်ပြည့်ရင်တော့ Register လုပ်ပြီး ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Payment အနေနဲ့ကော ဘယ်လိုပေးရမလဲ ?
Trial ကာလ ပြီးဆုံးပြီး Register စတင်လုပ်တာနဲ့ Charges စကောက်ပါမယ်၊ Prepaid စနစ်နဲ့ ကောက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ Link Pricing Plan မှာကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Plan တိုင်းအတွက် လစဉ်ကြေးအပြင် ရောင်းအား အပေါ်မူတည်ပြီး Charges ထပ်ကောက်တာမျိုးကော ရှိပါသလား ?
သတ်မှတ်ထားတဲ့ Plan အလိုက် ရောင်းသူအဆင်ပြေစေမယ့် ရောင်းအား ပမာဏ(Sales Volume) တစ်ခုအထိပေးထားပါတယ်၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Volume ကျော်သွားရင်လည်း ရောင်းအား အပေါ်ကနေ သင့်တင့် မျှတတဲ့ နှုန်းထား(%) နဲ့ပဲ ထပ်မံကောက်ခံမှာပါ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ Link Pricing Plan မှာကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Staff Accounts ဘယ်နှစ်ခုရနိုင်မလဲ ?
Hashbuy မှ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Pricing Plan အလိုက် Satff Account အရေအတွက်ကို ခွဲထားပါတယ်။ Basic Plan အတွက်ဆိုရင်တော့ Staff Account ကို ၂ ခု ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရယ် Staff Account တွေကိုလဲ Delete ပြန်လုပ်လိုလဲ ရပါတယ်။
Product တွေထည့်ပြီး Facebook ပေါ် Post မတင်ချင်သေးရင်ကော ရမလား ?
Product ထည့်ပြီး Facebook ပေါ် Post မတင်ချင်သေးရင်လဲ ရပါတယ်။ Save လုပ်ပြီးထည့်လိုက်တဲ့ Product ကတော့ Messenger ရဲ့ Product Category ထဲမှာတော့ ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Product Variation တွေကော ထည့်လိုရလား ?
Variation အမျိုးအစားကွဲတွေ ထည့်လိုရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Product အပေါ်မူတည်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Variation အများဆုံး (၃)ခု ထိထည့်လို့ရပါတယ်။
Product ကို Delete လုပ်လို့ ရလား ?
သင့် စိတ်ကြိုက် Product များကို Delete လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Delete လုပ်ပြီးသွားတော့ Product တွေကတော့ Product List စာရင်းထဲမှာပါမဟုတ်ပဲ သင် ရောင်းချမယ့် Product Category စာရင်း ထဲကပါ ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Order တွေကို ဘယ်လို လက်ခံရမှာလဲ ?
သင့် Store Manager မှ New Order ထဲကနေ သက်ဆိုင်ရာ အော်ဒါကို နှိပ်ပြီး လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ Link Order Management မှာကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အော်ဒါလက်ခံလိုက်ပြီးရင် Customers တွေကို အကြောင်းကြားရသေးလား ?
အော်ဒါလက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဈေးဝယ်သူကို Messenger နှင့် Email ကနေတဆင့် အလိုအလျောက် အကြောင်းကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့် Store ကို Facebook & Messenger နဲ့ ဘယ်လိုချိတ်မလဲ ?
သင့် Store Manager ထဲက Control Panel ကနေ Integration ရဲ့ အောက်မှာ Facebook & Messenger ကို Enable လုပ်လိုက်ရုံဖြင့် အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ။
Accept လုပ်ပြီးသား Order ကို Delete/Cancel လုပ်လိုရသလား ?
Accept လုပ်ပြီးသား Order ကို Delete လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် Delete လုပ်ပြီးသွားလျင်တော့ Customer ဆီကို သင်တို့ကိုယ်တိုင် ပြန်လည် ဆက်သွယ်ပေးရပါမယ်။
Hashbuy နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဈေးရောင်းနေတဲ့ Store တွေမှာ ဈေးဝယ်ချင်ရင် ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ ?
Messenger ကနေပဲ တိုက်ရိုက် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Messenger ကနေ တစ်ဆင့် ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ Hashbuy Code(#ABC123) ခလုတ်ကိုနှိပ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ၄င်း Hashbuy Code (#ABC123) ကိုရိုက်ထည့်၍သော်လည်းကောင်း၊ Product ဓာတ်ပုံပြသ၍သော်လည်းကောင်း ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝယ်ယူလိုတဲ့ ပစ္စည်းကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ ?
Hashbuy နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဈေးရောင်းနေတဲ့ Stores တွေရဲ့ Messenger မှာ Start Shopping ကိုနှိပ်၍ Category အလိုက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ မိမိရှာဖွေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို အသေးစိပ် ကြည့်ချင်ရင်လည်း အသေးစိတ် ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ်၍ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ရွေးချယ်ပြီးသားပစ္စည်းများကို ဈေးခြင်းထဲမှ ပြန်လည်ဖျက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အရေအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း တွေလုပ်လိုရပါလား ?
ပြန်လည်ဖျက်ခြင်းရင်ဖြစ်စေ၊ အရေအတွက်ပြောင်းလဲ မှာယူလိုဖြစ်စေ ပြန်လဲ ပြုပြင်လိုရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာယူတဲ့ အဆင့် (Check_Out) မရောက်ခင်မှာ ပြုလုပ်လိုရပါတယ်။
ပစ္စည်းရောက်ဖို့ ကြာချိန်ကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ?
လောလောဆယ်တော့ Seller ဘက်မှ အကြောင်းကြားမယ့် ကြာချိန်ကိုသာ သိနိုင်ပါဦးမယ်။
Product ဓာတ်ပုံ ပြပြီး လာဝယ်ရင်ကော ရလား ?
Product ဓာတ်ပုံကို ပြပြီး ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ မိမိဝယ်ယူချင်တဲ့ Product ဓာတ်ပုံကို သက်ဆိုင်ရာ Store မှ Download ချ၍သော်လည်းကောင်း၊ Screenshot ရိုက်၍သော်လည်းကောင်း မိမိဖုန်းထဲတွင် သိမ်းထားပြီး Messenger မှ တဆင့် ပြသဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Payment ကို ဘယ်လိုပေးရမလဲ ?
Merchant နဲ့ Customer ကြားကိုတော့ Cash On Delivery နဲ့ပဲ လောလောဆယ် အသုံးပြုနိုင်ပါဦးမယ်။
No. (655) B, Byamaso Road,
South Okkalapa Township, Yangon (11091)
09 459 905 550 , 09 459905 551
Online ကနေတဆင့် ဈေးရောင်းဈေးဝယ် ပြုလုပ်ရာမှာ လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် Program ရေးသားထားတဲ့ Messenger Bot လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Online ကနေတဆင့် ဈေးဝယ်သူအတွက် လွယ်ကူစေသလို ဈေးရောင်းသူအတွက်လည်း Stock, Order စတာတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ Manage လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်
© 2017 Hashbuy Myanmar All Rights Reserved.
Please enter your phone number to createahashbuy account.
We sentasix digits confirmation code to verify your phone number.
You have confirmed your phone, please create password for your hashbuy account.
Please enter your password to login to your account.
Please enter your store name to createastore.
Creating your store, this make takeamoment......
Creating database for the store, please wait.....
Initialising database for the store, please wait.....
Almost ready, please wait.....